1995 – Year – Alpha Premium
IMDB: 5.8/10 104,462 votes
Waterworld လူတိုင္းၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းကို အေထြအထူးေတာ့ေၿပာစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို ့ထင္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားရဲ ့ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ $175 Millions ေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုေၿပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို ့ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ရုပ္ရွင္ Set ၾကီးဟာ 40,000lbs ေလာက္ေလးၿပီး 365ft ေပ အခ်င္းရွိတဲ့ အၿပင္ ေပ 40 (ft) အၿမင့္ရွိပါတယ္။ ထို ့အၿပင္ ထို Set ၾကီးဟာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ေပၚမွာ ေမ်ာၿပီးေပၚေနတဲ့ Floating Set ၾကီးပါ။ ထို Floating Set ၾကီးကို Hawaii ကမ္းေၿခမွ ဆြဲေခၚလာခဲ့ရၿပီး လိုအပ္တဲ့ Steel ပမာဏလည္းမာ်းၿပားေသာ္ေၾကာင့္ California မွမွာယူခဲ့ရပါတယ္။ ထို ေရလည္ေခါင္က ရိုက္ကြင္း Set ၾကီးမွာ အိမ္သာေတြမရွိတဲ့ အတြက္ ရိုက္ကြင္းေရး အလုပ္သမားေတြဟာ ထိုအနီးအနားတစ္ဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ ...
IMDB: 6.2/10 177,877 votes
Toy Story 1+2+3+4 ရုပ္ရွင္ခ်စ္သူေတြထဲမွာ တြိဳင္းစတိုရီကို မၾကည့္ဖူးဘဲ ၾကီးျပင္းလာတဲ့သူဆိုတာ အေတာ္ရွားပါလိမ့္မယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကတည္းက တြိဳင္းစတိုရီကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္အရုပ္ေလးေတြ ဘယ္လိုမ်ား အသက္ဝင္မလားမလဲေတာင္ ေခ်ာင္းၾကည့္ဖူးၾကတဲ့သူေတြ ရွိမလားမသိဘူး။ ဝုဒီတို႕ ဘက္ဇ္တို႕နဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္သိုက္ဟာ မိတ္ေဆြေတြတိုးရင္း စြန္႕စားခန္းေတြ ဖြင့္ရင္း ေနလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းေတြ ၾကာလာခဲ့ပါၿပီ။ အရုပ္ေတြအတြက ္သူတို႕ရဲ႕ ပိုင္ရွင္ ကေလးငယ္ဆိုတာ ဘဝၾကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းက တိုေတာင္းပါတယ္။ ေသဆံုးသြားတာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အရုပ္ေတြကို စြန္႕ပစ္ၾကတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားကေလးကို ေပးပစ္ၾကတာေတြ လုပ္ၾကတာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႕ ဘိုပိ ဟာလည္းအျခားပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ဆီကို ေရာက္သြားၿပီး ဝုဒီတို႕နဲ႕ ကြဲကြာသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း အန္ဒီဟာ ဘြန္နီဆိုတဲ့ ကေလးမေလးဆီကို သူ႕ရဲ႕အရုပ္ေတြ ေပးပစ္လိုက္တာကေန စတင္ပါတယ္။ ဘြန္နီဟာ အရုပ္ေလးေတြကိုခ်စ္ၿပီး ေန႕တိုင္းကစားတတ္ေပမယ့္ သူ ေရြးေနက်မဟုတ္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ အရုပ္ေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တစ္ခ်ိန္က အန္ဒီရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ဝုဒီလည္း ပါေနတာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႕ ဘြန္နီေလး ပထမဆံုး မူၾကိဳကို ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႕လန္႕နဲ႕ သြားရင္းနဲ႕ ဇြန္းခရင္း တစ္ခါသံုးေလးကို ေဖာ့ကီဆိုတဲ့ အရုပ္အျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္မိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ခရင္းရုပ္ေလးက ဘြန္နီရဲ႕ မူၾကိဳေက်ာင္းမွာ အားေပးမယ္ အေဖာ္ေလးျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ့ကီဟာ မထင္မွတ္ဘဲ ဘြန္နီနဲ႕ ကြဲကြာသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဝုဒီဟာ ေဖာ့ကီကို ...
IMDB: 8.3/10 868,378 votes
Toy Story 1+2+3+4
Batman Forever (1995) ကြၽန္ေတာ္က Bruce Wayneပါ။ ေဂၚသမ္ရဲ႕ သူေ႒းသားေလး တစ္ေယာက္ေပါ့။ ေဂၚသမ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သန္းေခါင္ယံမွာ ပ်ံသန္းေနတတ္တဲ့ လင္းႏို႔တစ္ေကာင္လည္း ဟုတ္တယ္။ ဒါလည္း ေဘာစိမို႔ ပ်ံႏိုင္တာပါ။ ဝတ္စုံေတြက ေစ်းႀကီးတယ္ဗ်။ တစ္ခ်ိဳ႕ေန႔ေတြမွာ ဆင္းရဲသားေတြလို စက္ဘီးေပၚမဟုတ္ပဲ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္လို႔ေတာင္မရတဲ့ BatMobile ေပၚ ေၾကကဲြေနခဲ့တယ္။ ေသလြန္ခဲ့ၿပီးေသာ မိဘေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးရင္းေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ အတိတ္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေျခရာေကာက္ၾကည့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လက္စားေခ်ခ်င္စိတ္ကို အစျပဳၿပီး ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ Batman ျဖစ္တည္မႈက အစျပဳခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း လူသားပဲေလ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးခဲ့တဲ့ လူေတြကို ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွၽအထိ ကယ္မေနရဦးမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း မယားတ႐ူးခ်င္ေသးတယ္ေလ။ မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ဇိမ္ေလးနဲ႔ ႏွပ္… ေဘာ္ေၾကာ့ေနေနၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္။ အတိ္တ္ဆိုတာ ပလိပ္(Police)လိုပါပဲ..လုပ္ဖူးတဲ့မေကာင္းမႈေတြဆိုတာ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္လာတတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ့္ေနရာကိုယ္မေနပဲ ရန္သြားစထားခဲ့တဲ့ လူဆိုးေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္ ေအးေဆးမေနရေအာင္ လုပ္ျပန္တယ္။ ထားပါ ထားပါ..ဇာတ္သိမ္းကိုခင္ဗ်ားတို႔သိပါတယ္… အဆုံးမွာေတာ့ စူပါဟီး႐ိုးကားပီပီသသ ေစာ္ေလးကိုပစ္ၿပီး အထီးက်န္ဟီး႐ိုးႀကီးလုပ္ရဦးမွာပဲမလား။ ႐ုပ္႐ွင္ပဲေလ..ကြၽန္ေတာ္ကလည္း Mtv႐ိုက္တဲ့ ဖိုးလျပည့္ ပရဟိတလုပ္တဲ့ Bruce ...
IMDB: 5.4/10 230,252 votes
A Walk in the Clouds [Unicode] action မင်းသားကြီး Keanu Reeves ရဲ့ ငယ်ငယ်က အချစ်ဇာတ်ကားလေးတွေ ကြည့်ချင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ A walk in the clouds ဆိုတဲ့ကားလေးကိုလက်တို့လိုက်ပါတယ်.. ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးလို့ ချစ်ဇနီးထံ ပြန်လာတဲ့ Paul တစ်ယောက် ဇနီးသည်ရဲ့ ဆန္ဒအရ ချောကလက်ရောင်းဖို့ Sacramento မြို့လေးကို ရထားနဲ့ ခရီးနှင်ခဲ့ပါတော့တယ်… ကံကောင်းချင်လို့ပြောရမလား ကံဆိုးချင်လို့ပြောရမလား သွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲကိုယ်ဝန်ရသွားပြီး ချစ်သူကပါပစ်သွားလို့ အိမ်မပြန်ရဲဖြစ်နေတဲ့ မက္ကစီကန် ကောင်မလေးနဲ့ဆုံပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အခက်အခဲကိုကူညီဖို့ ဟန်ဆောင်ခင်ပွန်းအဖြစ် မိသားစုကိုလိုက်တွေ့ရာရနေ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံတဲ့ချိန်ဟာ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီး ဆိုင်သူရှိနေတဲ့ လူဖြူကောင်လေးနဲ့ တခြားသူရဲ့ရင်သွေးလေးကိုလွယ်ထားရတဲ့ စပျစ်ခြံပိုင်ရှင်သမီးလေးတို့ ဘယ်လိုနီးစပ်သွားကြမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ.. 1995 ဝန်းကျင်က အဝတ်အစား အခင်းအကျင်းနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုရဲ့ ပုံရိပ်တွေအပြင် ကြည်နူးစရာ ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ရောပြွမ်းနေတဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ပုံဖော်ထားတာမို့ ဟောင်းပေမယ့် ကောင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဒီကားလေးကို ညွှန်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ ( အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Thinzar Oo ဖြစ်ပါတယ် ...
IMDB: 6.7/10 30,700 votes
IMDB: 5.4/10 707 votes
Heat HEAT(1995) IMDb…8.2,,,,Rotten…86 ဒီကားက ၁၉၉၅ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ နေထိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်မှာ ရိုးစင်းလွန်းတယ် …ဒီဘက်ခေတ်အမြင်မှာ အဆင့်မရှိလောက်ဘူး ဇာတ်လမ်းကောင်းရင်တောင် ကြည့်ရတာ အံဝင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေရင်တော့ အဲ့ဒီအမြင်ကိုမြောင်းထဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပါလို့ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောလိုက်မယ်…. ဒီကားက ဟီးဟီးဟားဟားကွက်တွေ အော်ဂလီဆန်စရာသတ်ဖြတ်မှုတွေ ခြောက်လှန့်မှုတွေမပါဘူး .. .ဒါပေမယ့် ပြသချိန် ၃နာရီနားပါးကြီးမှာ တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်…. ဘာလို့ဆို မတူညီတဲ့ဇာတ်ကောင် ၂ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှုကြောင့်ပဲ…. . တစ်ယောက်က ရဲ။… သူ့မှတ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဆိုးပါတယ် လိုက်ဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုမှထောင်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့သူ. . .ရဲဌာန တစ်ခုလုံးကလည်း သူ့ကိုလေးစားရတယ်…..အယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ဒီကောင် အရမ်းတော်တယ်ဆိုပြီး ညည်းညူခဲ့ရတဲ့ ဓားပြတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်.. . တကယ်တော့ သူပြောတာထက်တောင်ပိုပါတယ်… အဲ့ဒီဓားပြက အကွက်ချတာတော်တယ်… ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ပြီး တစ်ဒင်္ဂအတွင်း အကောင်းဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တယ်. ….လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကြည့်တယ်…ဒီကားက စစချင်း ၁၀မိနစ်လောက်ကတည်းက ခင်ဗျားတို့အာရုံတွေ ဖမ်းစားလိုက်ပြီ… .. ဒီကားထဲက အဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး (၂)လက်ဖြစ်တဲ့ Al Pacino နဲ့Robert De Niro ကိုတော့ ...
IMDB: 8.2/10 555,104 votes
IMDB: 6.8/10 11,771 votes
Balto Balto(1995) Channel Myanmar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ Balto ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တည်းက ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲကောင်းခွေးလေးတစ်ကောင်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ IMdb 7.1 နဲ့ Rotten Tomato 54% ရရှိထားတဲ့ Animated ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ ဘော်တို လို့အမည်ရတဲ့ ဝံပုလွေသွေးနှောတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးချစ်သူ တိချစ်သူလေးတွေကတော့ 1925 Serum Run to Nome မှာ ထင်ရှားတဲ့ ဘော်တို တို့ တိုဂို တို့ ကို ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အလက်စကာ မှာရှိတဲ့ နုမ်း မြို့လေးရဲ့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ဆောင်းရာသီတစ်ခုမှာ ကလေးငယ်လေးတွေဆီကို ကပ်ရောဂါတစ်ခု ကျရောက်လို့ လာခဲ့ပါတယ်။ နုမ်းမြို့ငယ်လေးရဲ့ တစ်ခုတည်းသောဆေးရုံမှာ ရောဂါဖြေဆေးတွေလည်း ...
Twelve Monkeys 12 Monkeys (1995) ဒီရုပ်ရှင်က ဘယ်လိုရုပ်ရှင်မျိုးလဲဆိုတာ ဥပမာပေးရရင် ဟိုးတုန်းက ကြက်ဥနဲ့ကြက်မ ဘယ်ဟာ အရင်ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့Paradoxလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကြက်ဥခွံမှာပါတဲ့ ဒြပ်တစ်မျိုးကို ကြက်မကသာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အတည်ပြုပြီးစီးခဲ့တဲ့အတွက် တခြား ဥပမာတစ်ခုပြောင်းသုံးပါမယ်။ ဘုရားသခင်သာ အရာအားလုံး လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူမ နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ တောင်တစ်လုံးကို ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့ Omnipotence paradoxပါ။ ဘုရားသခင်က သူမနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ တောင်တစ်လုံးကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း သူအရာအားလုံး မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်လည်း သူ အရာအားလုံး မလုပ်နိုင်သေးပြန်ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ ကိုယ့်အမြှီး ကိုယ်ပြန်မြိုထားတဲ့ မြွေတစ်ကောင်ပါပဲ။ 1996မှာစပြီး လေထုထဲ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပေါ်မှာ လူတွေနေလို့မရတော့ပါဘူး။ လူသားတွေဟာ မြေအောက်ထဲမှာ မြေကြွက်တွေလို ရှင်သန်နေရပါတယ်။ 2035မှာ‌တော့သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အချိန်ယန္တရားကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ကမ္ဘာ့လေထုထဲ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ mutation ဖြစ်မသွားခင် မူလပုံစံရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အတိတ်ကနေ ပြန်စုံစမ်းဖို့ အခွင့်အရေးရလာပါတယ်။ ကောက်ချက်တွေအရတော့ 12monkeysလို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဖြန့်ခဲ့တာ သိထားပါပြီ။ 12monkeysကို ...
A Chinese Odyssey Part 1+2+3
IMDB: 8.0/10 5,884 votes
IMDB: 7.0/10 1,660 votes
A Walk in the Clouds ဒုတိယကမာၻစစ္ျပီးလုိ႕ အိမ္ျပန္လာတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ာ္းတစ္ဦးဟာ လမ္းမွာ ေတြ႕တဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးရဲ့ ေယာက်ာ္းအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျပီး အမ်ဳိးသမီးရဲ့ အေဖရဲ့ ေဒါသနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့တဲ့အခါ ဘယ္လို ဒရာမာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြ ျဖစ္မလဲ ဇာတ္ကားမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈခံစားၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ာ….
IMDB: 6.7/10 30,170 votes